Borian’i Tailandy ny Fanampiana mikasika ny Vidim-bary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2013 14:38 GMT
Taorian'ny fisian'ny fatiantoka 4,4 lavitrisa dolara, nanambara ny governemanta any Tailandy fa mihena ny famatsiam-bola ho an'ny vary izay nomeny ireo mpamboly efatra tapitrisa. Laminasa naroso tamin'ny 2011 taorian'ny nandresen'ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra tamin'ny fifidianana, izay hividianan'ny governemanta amin'ny vidiny lafo ireo voka-barin'ny mpamboly mialohan'ny hivarotany azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Natao mba hampitomboana ny tahirin'ireo mpamboly izany tetikasa izany.
Tao anatin'ny dimampolo taona, i Tailandy no firenena mpanondrana vary betsaka indrindra eran-tany, saingy nanjary nihoaran'i Inde sy Vietnam izy taona vitsivitsy lasa izay. Manameloka ny tetikasa fitsinjovana ny voka-bary ho niteraka ireo fatiantoka goavana ara-bola teo amin'ny sehatry ny fambolem-bary ireo mpitsikera.
Manamafy i Veera Prateepchaikul fa tsy mari-pototra hatrany amboalohany ny tetikasa:
Hatramin'ny andro voalohany, voatsikera ho tsy mari-pototra ny tetikasa fitsinjovana ny voka-bary. Ny naha-maika azy voalohany dia ny hisarihana ireo mpamboly mba hifidy azy, ka ny hany tombony azon'ireo mpamboly dia ny maha-laharana faharoa azy eo amin'ny laharam-pahamehana.
Mpamboly any Tailandy nandritra ny fihetsiketsehana teo amin'ny Lapam-panjakàna. Sarin'i Piti A Sahakorn, Copyright @Demotix (6/25/2013)
Milaza ny lahatsoratra iray tao amin'ny Asia Sentinel fa ireo mpanelanelana sy ireo mpivaro-bary no mahazo tombony fa tsy ireo mpamboly mahantra:
Mampametra-panontaniana ihany koa ny hoe inona ny tombony entin'io tetikasa io ho an'ireo mpamboly, hoy ireo loharanom-baovao hafa. Na dia tsy azo lavina aza fa mahazo tombony amin'ny halafon'ny vidim-bokatra ireo mpamboly, ireo mpanelanelana hatrany no mahazo betsaka indrindra mandritra ny fotoana maharitra.
Milaza i Peter Warr fa fepetra mikendry ny vahoaka any Tailandy io famatsiam-bola ho an'ny vary io:
Ireo fepetra mikendry ny vahoaka ireo dia mikendry tombontsoa ara-politika amin'ny fe-potoana fohy ho an'ny governemanta, amin'ny alalan'ny fakàna vato, ary tombontsoa ara-toekarena ho an'ireo sehatra nosafidiana manokana, tsy misy fijerena izay hitady ireo vahaolana maharitra mikasika ireo olan'ny firenena.
Io tetikasa vaovao io dia manalavitra ireo tanjona fividianam-bary teo aloha nohon'ny vidiny midangana, ary koa noho izy tsy mahavita mametra ireo vary vidian'ny governemanta.
Manazava izay tsy mety momba io tetikasa io i Vikram Nehru ary manolotra vahaolana:
Ankoatra ny fidangan'ny vidim-bary, olana hafa mikasika ny tetikasa vaovao momba ny voka-bary ny kolikoly. Voatery ireo mpamboly mivarotra amin'ny ireo variny amin'ny mpitoto koba, izay zara raha afaka mampidina ny vidy hividianany izany eny an-tsena amin'ireo mpamokatra, no sady mahazo onitra avy amin'ny governemanta amin'ny tahan'ny fanangonam-bokatra. Tsy mahagaga raha nitombo ny isan'ireo fitotoan-koba nandritra ny taona farany teo.
Tokony hiverina amin'ny fomba izay nampiasainy talohan'ny taona 2006 i Tailandy, izay nanome antoka ireo mpamboly ny vidiny somary latsaka kely mihoatra amin'ny vidiny eny an-tsena.
Saingy resy lahatra ny governemanta fa mahomby io tetikasa io. Manambara izy fa nanome tombony ireo mpamokatra mahantra antapitrisa io tetikasa io:
…97,8 isan-jaton'ireo mpamokatra no nanaiky fa nanampy tamin'ny fanalefahana ireo fahasahirany io tetikasa io na mivantana na an-kolaka, raha toa ka ny 93,7 isan-jato no afa-po tamin'ny tetikasa, ary 85,4 isan-jato no nilaza fa manana tahiry misimisy kokoa.
Mamerina mitsikera i Andrew Spooner fa ireo famatsiam-bola amin'ny fambolena izay nomen'ireo firenena eropeana dia betsaka noho ny famatsiam-bola amin'ny fambolem-bary nomen'i Thailandy:
Ny mahatalanjona amin'izao rehetra izao dia somary kely ny tetikasa fanampiana mikasika ny fividianam-bary ataon'i Tailandy raha toa ka mifandraika amin'ireo vinavinan'ny governemanta ny fatiantoka mitontaly 2 lavitrisa dolara. Any amin'ny Vondrona Eropeana ohatra ny fanampiana mikasika ny fambolena dia mahatratra 75 lavitrisa USD raha toa avy amin'ny famatsiam-bolan'ny governemanta kosa ny 60 isan-jaton'ireo fidiram-bola ara-pambolena rehetra any Korea, Soisa, ary Japana sy Norvezy.
Tsy dia misy mahagaga ny momba ny fanampiana mikasika ny fambolena. Ary ny tetikasa fividianam-bary dia efa naroso tamin'ireo mpifidy nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny taona 2011 ary nazava tamin'izany ny fifidianany mba hanohanana io politika io.
Manao fanamarihana mitovy amin'izany i Terence Chulavachana :
Hatraiza ny fari-piainan'ireo mpamboly any Tailandy? Hatraiza ny fari-piainan'ireo mpamboly any Eropa sy Etazonia? Ny marina dia tena mahantra ireo mpamokatra thailandais raha ampitahaina. Ohatrinona ny famatsiam-bola amin'ny fambolena any Tailandy? Ary ohatrinona ny famatsiam-bola amin'ny fambolena any Eropa sy Etazonia? Ny marina dia ampahany kely amin'ny famatsiam-bola amin'ny fambolena any Eropa sy Etazonia ny famatsiam-bola amin'ny fambolena any Thailandy.
Ka nahoana no be ireo fahatezerana hita tamin'ny famatsiam-bola amin'ny vidim-bary any Tailandy?
Nanohitra avy hatrany ny fampihenana ny famatsiam-bola ireo mpamboly vary ary nilaza fa hanatontosa fihetsiketsehana hafa any Bangkok sy tanàna hafa.